स्वास्थ्य जिबनशैली – Sapana Sanjal
वहुउपयोगी गुर्जो कसरी र कति खाने ? यसका वेफाइदा पनि छन् जानी राखौं
Posted in स्वास्थ्य जिबनशैली
Sapana Sanjal : काठमाडौ । आयुर्वेदका वरिष्ठ चिकित्सक डा। ऋषिराम कोइराला अनुसार महामारी अगाडि पनि ज्वरो आउँदा, जन्डिस हुँदा, हाडजोर्नी वा क्या न्स रको समस्या भएका बिरामीलाई खान दिइन्थ्यो। दक्षिण एशियाका भारत र श्रीलङ्कामा पाइने गुर्जो नेपालको पनि तराईदेखि हिमाली क्षेत्रसम्मै पाइने आयुर्वेदका चिकित्सकहरू बताउँछन्। रोगसँग ल ड् ने प्रतिरोध क्षमता बलियो बनाउने भएकोले गुर्जो खाँदा सङ्क्रमणबाट जोगिन मद्दत पुग्ने कोइराला बताउँछन्। “गुर्जो बहुउपयोगी जडिबुटी हो। यसको अवगुण वा शरीरलाई अन्य असर गर्ने तत्व नभएकोले यो खाँदा फाइदा हुन्छ,” उनले भने। “यसमा भएको एन्टिअक्सिडेन्ट गुणका कारण कतिपय मानिसले यो खाएपछि अलि कमजोर भएको महसुस गर्न सक्छन्। त्यस्तो भए मह मिसाएर खाँदा हुन्छ।” उनका अनुसार यसले शरीरमा चिनीको मात्रा थोरै घटाउन सक्छ। तर त्यो असर लामो समय रहँदैन। गुर्जो कति र कसरी खाने ? चिकित्सक
अमृत तुल्य ज्वानोले यी ९ राेगका लागि गर्छ चमत्कारी फाइदा, एकचोटी पढेर, सेयर गर्नुहाेला
Sapana Sanjal : अमृत तुल्य ज्वानोले यी ९ राेगका लागि गर्छ चमत्कारी फाइदा, एकचोटी पढेर, सेयर गर्नुहाेला । मौसम परिवर्तनको बेला हुने संक्रमणले मानिसहरू अनेक खालका मौसमी रोगबाट पीडित हुने गर्दछन् । यस्तोमा राम्रोसँग तरकारीमा ज्वानोको प्रयोग गर्ने हो भने हाम्रो जीवन स्वस्थ्य रहने छ । भान्छामा सहजै पाइने ज्वानो एक प्रकारको औषधी नै हो । ज्वानोलाई पेट दुखेको औषधीका रूपमा बढी प्रयाेग गरिन्छ । पेट दुखेको बेला ज्वानोको दाना चपाएर खाए पेट दुखेको निको हुन्छ । ज्वानोको गेडामात्र नभएर तेल, फूल र बोटबिरुवालाई समेत विभिन्न रोगमा औषधीका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । यस्ता छन् ज्वानाेका बाकिँ ९ फाइदाहरु:- ￼￼ १) र-क्सी छुटाउन:- ज्वानो प्रयोग गरेर बनाइएको ‘काँढापानी’ प्रत्येक रात सुत्नेबेला ३० मिलिलिटर करिब ५० दिनसम्म सेवन गर्ने हो भने यसले र-क्सी अ-म्मली हटाउन सहयोग गर्छ । २) तौल घटाउनमा ज्वानो:- ज्वानोमा प
तुलसीका अचुक फाइदाहरु, हृदय रोग देखि कुष्ठ रोगका लागि हुन्छ लाभदायक !
Sapana Sanjal : तपाईलाई थाहा छ, तुलसी अक्सिजनको अचुक औषधी हो । तुलसीमा औषधीय गुणहरु हुने भएकाले गर्दा तुलसी सुँघ्नु स्वास्थ्यको लागी निकै फाईदाजनक रहेको छ । तुलसीले मानिसमा अक्सिजनको मात्रामा कमी आउन दिदैन् । यसलाई अक्सिजनको रुपमा मात्रै प्रयोग नगरी बिरामी भएको बेलामा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसलाई पेट दुखेको बेलामा समेत प्रयोग गरिन्छ । रुघा, खोकी लागेको बेलामा पानी सँग तुलसीकोे पात मिसाएर सेवन गरेको खण्डमा रुघा चाडै निको हुन्छ । ज्वरो आएको बेलामा पनि तुलसी प्रयोग गर्न सकिन्छ । कुनै बेला शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम भएको बेलामा पनि तुलसीको प्रयोग तथा सेवन गर्न सकिन्छ । तुलसी र्अगानिक बिरुवा भएको कारणले गर्दा यसबाट प्रसस्तै मात्रामा लाभ लिन सकिन्छ ।
Sapana Sanjal : सुगर तथा हाडजोर्नीको दु-खाईका लागि अमृत समान हुन्छ यो फूल, जानिराखे राम्रो ! हाम्रो वरिपरिका वनस्पतिबाट हाम्रा पूर्वजहरुले औषधि बनाउँथे र तिनै वनस्पतिको प्रयोगले नै निको पनि हुन्थे । ती वनस्पतिहरुले कुनै नकारात्मक असर पनि नगर्ने हुनाले मानिसहरु स्वस्थ रहन्थे र उनीहरुको आ-यू पनि लामो हुने गर्थ्यो । त्यसै एक किसिमकाे फूलकाे नामा हाे कनेर फूल जुन हिमाली क्षेत्रमा अर्थात चिसो ठाउँमा पाइन्छ । यो फूल सेतो, रातो, पहेंलो लगायत रंगमा हुन्छ । यो फूल विशेष गुणहरुले भरिपूर्ण फूल हो । यो फूल यति कडा हुन्छ कि, यसको वरिपरि सर्प आउँदैन । सर्प, वि-च्छी आदि वि-षालु कि-राले टो-केको ठाउँमा यो फूल लगाउनाले निको पार्छ । जसका लागि फूललाई मिचेर त्यसको सेतो पदार्थ निकाल्नुपर्छ र कि-राले टो-केको संगै यस फूलको रसले का-टेको, पोलेको लगायत अन्य घा-उलाई पनि निको पार्छ । यो फूल हरेक जसो बिमारको लागि
Jun202021 by AdminNo Comments
Sapana Sanjal : पेटमा ग्यास भरिने समस्या छ भने खानुहोस् यो बिरुवाको पात, १० मिनेटमै मिल्नेछ तपाईलाई राहत ! आजको समयमा गलत खानपानको कारण धेरै मानिसहरुलाई ग्यास सम्बन्धित समस्या हुने गर्दछ । आज हामी तपाईलाई यसैसँग सम्बन्धित कुराहरुको बारेमा जानकारी दिनै छौँ । एउटा यस्तो पात चबाउनुहोस् जसले १० मिनेटमा नै तपाईको पेटमा भएको ग्यासलाई तुरुन्त राहत दिनेछ र तपाईको यो समस्या पनि टाढा हुनेछ। पत्थरचट्टाको बिरुवा:- आयुर्वेदमा पत्थरचट्टालाई भष्मपथरी,पाषणभेद र पणपुट्टीस्को नामले पनि चिनिने गरिन्छ भने मोडिकल साइन्समा यसलाई bryophyllum pinnatum पनि भन्ने गरिन्छ । यो बिरुवा मानिसको स्वास्थयको लागी अधिक लाभकारी छ । यसले ग्यासको समस्यालाई जरैदेखी निमूर्ल पार्दछ । यसकाे प्रयाेग गर्ने तरिका:- १) यदि तपाईलाई ग्यासको समूया छ भने तब तपाई बिहानको समयमा यसको एउटा पातलाई चबाउनुहोस् । यसो गर्दा तपाईमा ग्यासको स
को-रोना बाट आ`त्तिएका मानिसहरुले बल्ल बुझे आर्युेवेदिक औषधिको महत्व, आर्युवेदिनक औषधी किन्नेकाे भिड लाग्दै !
Sapana Sanjalको-रोना बाट आ`त्तिएका मानिसहरुले बल्ल बुझे आर्युेवेदिक औषधिको महत्व, आर्युवेदिनक औषधी किन्नेकाे भिड लाग्दै ! गलकोट अस्पतालभन्दा पहिला सञ्चालनमा आएका आयुर्वेद औषधालय को-रोना आउनुभन्दा पहिला प्रायः सुनसान अवस्थामा थिए । आयुर्वेद औषधालयमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी फुर्सदिला हुन्थे । पछिल्लो एक वर्षयता देखिएको को- रोना भाइरसले आयुर्वेद औषधिको महत्व उल्लेख्य बढाएको छ । अहिले आयुर्वेद औषधालयका स्वास्थ्यकर्मीसमेत व्यस्त देखिन थालेका छन् । को-रोना जितेका अधिकांशले बेसार, गु-र्जो, असुरोलगायतको सेवनका कारण को-रोना जितेको अनुभव सुनाउँछन् । सक्रिय सङ्क्रमित सङ्क्रमणको बखत बेसार र गु-र्जो पानी नखाने कमै भेटिएका छन् । को-रोनाको हालसम्म कुनै औषधि नबनेका कारण को-रोना जित्न सहयोगीका रूपमा आयुर्वेद औषधिको प्रयोग गर्ने क्रम उल्लेख्य बढेको धवलागिरि आयुर्वेद औषधालयले जनाएको छ । कार्
काे-राेना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन जाँदा के–के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ त ? पढ्नुहाेस् र जानकारि सेयर गर्नुहाेस्
Sapana Sanjal : काे-राेन भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन जाँदा के–के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ त ? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले को-रोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन जाँदा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले खोप लगाउन जाँदा नागरिकता वा उमेर खुल्ने कुनै पनि सरकारी कागजात वा वडा कार्यालयले दिएको सिफारिस अनिवार्य लिएर नजिकको स्वास्थ्य संस्था जान आग्रह गरेको छ । त्यस्तै अनिवार्य नाक, मुख छोपिने गरी मास्क लगाउन, स्यानिटाइजर साथमै बोक्न, खोप लगाउने बेला पनि मास्क लगाइरहने कुरामा ध्यान दिन मन्त्रालयले सबैलाई आग्रह गरेको छ । साथै खोप लगाउन जाँदा छोटो बाहुला भएको अनि खुकुलो कपडा लगाएर जान र खोप लगाउने लाइनमा बस्दा दुई मिटरको भौतिक दुरी कायम राख्न मन्त्रालयको आग्रह छ । खोप लगाएपछि झन्डै आधा घण्टासम्म खोप केन्द्रमै बस्न र घर फर्किएपछि साबुनपानीले मिचिमिची हात धुन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
Sapana Sanjal : हरियो प्याजले निको पार्छ यस्ता रोगहरु, जसकाे बारेमा धेरैलाई थाहै नहुनसक्छ ! हरियो प्याज स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिनछ । यो एउटा कन्दमुल हो । यसको सेवन गर्दा विभिन्न किसिमका रोग बाट मुक्त हुन सकिन्छ । धेरै जसो मानिहिरुलाई थाहा नहुन पनि सक्छ यसको सेवन गर्दा कति फाइदा हुन्छ भनेर हरियो प्याजले मोटो शरीरको तौल पातलो बनाउँछ । यसले ब्ल्ड सुगर लेभललाई कन्ट्रोल गर्ने भएकाले डायबेटीजको बिरामीलाई निक्कै फाइदा पुर्‍याउँछ। यसमा एन्टी इन्फ्लेमेटरीको गुण भएकाले यसले अर्थराइटिस हुनबाट जोगाउँछ । हरियो प्याजमा भिटामिन ए समेत रहेको हुँदा यसले आँखाको ज्योति बढाउनुका साथै रतन्धो हुनबाट पनि जोगाउँछ। । यसमा एन्टी ब्याक्टेरियल गुण भएकाले यसले रुघाखोकी तथा टाउँको दुखेकोलाई सन्चो बनाउँछ। यसमा भिटामिन सी को मात्रा धेरै हुने भएकाले कमजोरी हटाउँछ र भरपूर शक्त
को-रोना संक्रमणका यि ५ खतरनाक लक्षणहरु जुन देखिनासाथ अस्पताल गइहाल्नुपर्छ !
Sapana Sanjal : को-रोना संक्रमणका यि ५ खतरनाक लक्षणहरु जुन देखिनासाथ अस्पताल गइहाल्नुपर्छ ! छिमेकी मुलुक भा-र-तसँगै नेपालमा पनि को= रोनाबाट हुने संक्रमण र मृ- त्यु दर दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । विज्ञका अनुसार अहिले को- रोना संक्रमणका नयाँ–नयाँ लक्षण पनि देखापरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा भा-रत स्थित उजाला सिग्नस हस्पिटलका हृदयरोग विशेषज्ञ डाक्टर एस.सी. तिवारीले को- रोना संक्रमणका खतरनाक ५ लक्षणबारे बताएका छन्। भारतीय पत्रिका अमर उजालामा प्रकाशित उनका सुझाव हाम्रा लागि पनि उपयोगी हुन सक्ने भएकाले यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:- १) अक्सिजनको मात्रा कम हुनु:- को- रोना संक्रमण भएपछि शरीरमा अक्सिजनको मात्रामा निकै नराम्रो प्रभाव पार्छ। हाल धेरैजसो संक्रमितमा अक्सिनको स्तर कम देखिएको छ, जसले गदाृ उनीहरू अस्पताल भर्ना हुन बाध्य भइरहेका छन्। यीमध्ये कतिपयको मृ- त्युसमेत भइरहेको छ। यसकारण सतर्क हुन जरुर